Hiiraan Xog, May 18, 2018:- Senate-ka Maraykanka ayaa markii u horraysay haweenay u idmaday in ay hogaamiso hay’adda sirdoonka Maraykanka ee CIA, inkastoo ay door ku soo yeelatay barnaamij ay hay’addani fulisay 9/11 oo dadka lagu baarijiray. Ansixinta Gina Haspel ayaa timid iyadoo kala qaybsanaan xisbi ay ka jirtay aqalka arrintaas oo la xiriirtay biyo maxaabiista...
Hiiraan Xog, May 18, 2018:- Booliiska dalka Malaysia ayaa sheegay in ay qabteen boqollaal kaartoon oo ay ka buuxaan waxyaabo qaali ah iyo boorsooyinka ay ka buuxaan lacago qalaad kuwaas oo laga helay guri lala xiriiriyay ra’iisulwasaarihii hore ee dalkaas Najib Razaq. Baaritaannada lagu sameeyay dhismeyaasha ku yaalla Kuala Lumpur ayaa lala xiriiriyay baaritaanno...
Hiiraan Xog, May 17, 2018:- Jaaliyada reer Hiiraan ee magaalada London oo Deeq rashiin ah gaarsiyay dadka ay sameeysay Fatahaada Wabiga Shebeelle ee magaalada Beledweyne. Deeqdan ayaa loo soo wakiishay madaxa Shirkada Dahabshiil ee gobolka Hiiraan Xaaji Cismaan Dhagaxoow. Xaaji Cismaan Dhagaxoow ayaa sheegay in Jaliyada reer Hiiraan ee magaalada London ay lacag dhan 10,000...
Hiiraan Xog, May 17, 2018:- Kooxo hubeysan ayaa caawa weerar ku qaaday laba barkontorool oo ku yaalla duleedka magaalada Muqdisho, sida ay Warbaahinta u sheegeen Saraakiisha ammaanka ee dowlada Soomaaliya. Kooxaha hubeysan ayaa weeraro isku mar bilowday waxa ay ku kala qaadeen fariisin ciidanka dowladda ay ku leeyihiin Siinka-dheer iyo fariisin kale oo ciidamo Nabad Sugid...
Hiiraan Xoh, May 17, 2018:- Wararka inaga soo gaaraya magaalada Baydhabo ee xarunta KMG ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa waxa ay sheegayaan in weerar bambo gacmeed loo adeegsaday uu fiidnimadii caawa ka dhacay magaalada Baydhabo. Qaraxan ayaa ahaa mid si weyn looga maqlay xaafada Onodka oo ah goobta uu Qaraxa ka dhacay, dad goobjoogayaal ah ayaa Warbaahinta...
Hiiraan Xog, May 17, 2018:- Shirka Khamiislaha ah ee golaha Wasiirada xukuumadda Federaalka Soomaaliya oo uu shir gudoomiyay Ra’iisul wasaare Xassan Cali Khayre ayaa lagu ansixiyay sharciga Duulista iyo Hawada, iyada oogolaha la hor geeyay Hindise sharciyeedka denbiyada kufsiga iyo harciga Nakhshadeynta magaalooyinka, waxaana golaha warbixinno siiyay qaar kamid ah wasiirada...
Hiiraan Xog, May 17, 2018:- Guddoomiyaha G/Banaadir Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan (Eng. Yarisow) ayaa maanta daah-furay olole lagu afurinayo 15 kun oo qoys. Maamulka Gobolka Banaadir ayaana Sanadkii labaad afurinaya Bulshada danyarta ah ee ku nool Magaalada Muqdisho. Duqa Caasimadda oo weheliyeen masuuliyiin ka tirsan maamulkiisa, madaxda Hay’adda Samafal Bulsho iyo qaar...
Hiiraan Xog, May 17, 2018:- Wasiirka amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow (Ducaalle) ayaa sheegay dhawaqyadii xalay laga maqlay magaalada Muqdisho in ay ahaayeen baco lagu shubay baaruuda qaraxda, oo ah kuwa macmal ah. Magaalada Muqdisho ayaa xalay si wayn u maqlay dhawaqyada wax u eg madaafiic oo magaalada ku soo dhacay, degmooyinka Hodan, Hawlwadaag,...
Afti ka dhaceeyso dalka Burundi
Hiiraan Xog, May 17,2018:- Dadka Burundi maanta oo Khamiis ah waxa ay codkooda ka dhiiban doonaan afti la doonayo in lagu kordhiyo mudada madaxweynaha oo looga dhigo 7 sano. Haddii dadka dalkaasi ay ansixiyaanna, Madaxweyne Pierre Nkurunziza, ayey suuragal tahay inuu dalkaasi sii hogaamiyo ilaa 2034-ta. Hasayeeshee ololaha aftida ayaa waxaa hareeyay mucaaradka oo ku goodinayay...
Duufaan halis ah oo ku soo foolleh dhul xeebeedka Soomaalida
Hiiraan Xog, May 17, 2018:- Duufaan xoog leh oo loo bixiyay ONE ayaa ka soo kacaysa waqooyiga badwaynta Hindiya waxaana la filaya in ay saamayn doonto inta badan gobollada Jamhuuriya iskeed ugu dhawaaqday madaxbannaanida ee Somaliland iyo Puntland 24 ilaa 48 saac ee foodda inagu soo haysa, sida ay sheegtay hay’adda Qaramada Midoobay u qaabilsan Cunnada iyo Beeraha...